ARỤ EMEELA!!! NWOKE HAPỤRỤ NWANYỊ DINA EHI – hoo!haa!!
ARỤ EMEELA!!! NWOKE HAPỤRỤ NWANYỊ DINA EHI
N’otu obodo akpọrọ Eldoret ka-ejidere otu nwoke na Satọdee gara aga ebe ọ na-edina ehi onye agbata obi ya.
Ndi bi nogbe ebe arụa mere kwuru na nkea abụghị mbụ ha na-enweta ihe ọgbụgba ama na ụdị ajọ ihea na-eme n’ebe ahụ. Nkea mere onye ọbụla nwere ụmụ anụmanụ ebe ahụ ji achị obi n’aka maka ụmụ anụmanụ ya.
Nwoke kpara ajọ agwaa nke aha ya bụ Chepkwony Kurugat, ka ekwuru na ọ mezuela ụdị arụa ihe ruru ugboro iri anọ. O kwuputara nkea mgbe ndi obodo ahụ chọrọ itigbu ya n’iwe.
Onye jidire nwokea n’anya ọcha sịrị na o kedoro ehi ahụ n’ukwu osisi didebere ụlọ ehi ahụ ma malite ita ya mkpụrụ osisi asị ka-atana.
Ekwuru na tupu iko nwokea eju, na o werela okpa zọrọ onwe ya ọtụtụ mgbe achọpụtara na ihe dị etua na-aga. Mana nke kita, nkata kputere onye aghụghọ.
Ndi agbata-obi ebe ahụ kụrụ nwokea isi aba okpu na-agbanyeghị ayịyọ niile ọ yọrọ ka-agbaghara ya.
Ụmụ nne nwokea gọnarịrị nwokea n’ihi na ha sịrị na ha adọọla ya aka na ntị ọtụtụ mgbe maka ụdị ajọ akparama agwaa. Ha sịrị na ugbua ejidere onye ori jidekwue agụgọ ya, na ọ dị mkpa ka ataa ya ezigbo ahụhụ kwesịrị arụ o mere.
Nwoke nwe ehia nke kọwara onwe ya dịka Kiptanui, sịrị na nkea mere ya ehi ya ise gabigere ụdị ajọ akparama agwaa.
Ọ sịrị na ọ bụ ihe jọgburu udele ma sigbue nkakwụ na mmadụ na-ahapụzị araa añụ akpụ osisi, ma kwue na ọ dị mkpa ka ndi mmadụ chegharịa.
Mgbe ajụrụ nwoke omekomea ajụjụ maka ihe butere ya ụdị arụrụma-alaa, ọ zara na ụmụ nwanyị obodo ha anaghị ekwe ka ya na ha nwee mmekọ.
Ka ọ dị ugbua, akpọgala nwokea ebe ana-anọ akpọchiata ndi hapụrụ ime ka mmadụ ma na-eme ka anụ ọhia, ka amara ma isi ya ekopula tupu akpụgara ya ndi uwe ojii. Atụkwara anya na emechaa nkea, akpụpụ ya ụlọ ikpe.
Previous Post: NDI ỤKA KATỌLIK NKE ABUJA GA-EME NGAGHARỊ UDO
Next Post: ISI